प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुनः संवादशून्यको अवस्थामा
काठमाडौं, २५ साउन।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुनः संवादशून्यको अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड १३ साउनको बैठक प्रकरणको ६ दिनपछि वार्तामा जुटेका थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई साक्षी राखेर तीनदिन वार्ता-छलफल चल्यो ।
सहमतिको गाँठो नफुक्दै प्रचण्डसहित सचिवालयका चारजना नेताले पत्रकार भेलाको आयोजना गरेपछि ओलीसँगको वार्ताको सिलसिला टुटेको हो । अहिले दुईजना अध्यक्षलाई संवादमा जोड्ने कडी फेला नपरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
“दुई अध्यक्षबीच अझै दुई–चारदिन वार्ताको सम्भावना छैन । वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो पनि देखाउनुभएको छैन,” बालुवाटारनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पत्रकार जमघट प्रकरणपछि बिहीबार बिहानै स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका सुवास नेम्वाङ प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । प्रचण्डसँगको भेट सकारात्मक रहेको भन्दै फुटको बाटोमा पार्टी हिँडिनसकेको बताएका थिए ।
“भेटमा मैले बुधबारको पत्रकार भेलाबारे जिज्ञासा राखेँ । वार्ता छलफल चलिरहेको छ, भटाभट नियुक्ति किन गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गर्ने तपाईंहरूले किन पार्टीभित्रको विवाद पत्रकारका बीचमा लैजानु भएको ? योचाहिँ विधि सुहाउँदो कुरा हो ? भनेका थिए ।
बुधबार प्रचण्ड र नेम्वाङबीच झण्डै एक घण्टा वार्तालाप भएको थियो । खुमलटारनिकट स्रोतले जानकारी दिएअनुसार प्रचण्डले ओलीले वार्ताको पहल गर्नुपर्ने र समस्याको निकास पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
बालुवाटारले चाहनेबित्तिकै वार्ता, संवादको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै निरर्थक संवादका लागि आफू बालुवाटार नधाउने बताएका थिए ।
नेम्वाङले ओली र प्रचण्डबीच छिट्टै संवाद हुने सम्भावना नरहेको संकेत गरेका थिए । “सचिवालयका चारजना नेताले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि माहोल तात्तिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री पनि तात्तिनु भएको छ, चिसिन समय लाग्छ नै, हामी पनि पहल गर्छौं,” नेम्वाङले भनेका थिए ।
ओली–प्रचण्डबीच संवादशून्यको अवस्था सिर्जना भएपछि शनिबार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल खुमलटार पुगेका थिए । खुमलटार स्रोतले जानकारी दिएअनुसार प्रचण्डले बुधबारकै कुरा दोहोर्‍याएका थिए । ओलीले दम्भ, अहंकार त्यागेर वार्तामा बस्न राजी नभएकाले संवादशून्यको अवस्था सिर्जना भएकाले बालुवाटारले नै पहल थाल्नुपर्ने दोहोर्‍याएका थिए ।
“उतैबाट वार्ताको पहल गर्नुपर्छ । समस्या पनि उतै भएकाले यताको पहलको अर्थ छैन,” प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै खुमलटार स्रोतले भन्यो ।
गत मङ्गलबार प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणबारे जनस्वास्थ्य विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका अतिरिक्त प्रचण्डलाई पनि बोलाइएको थियो ।
देउवा र ठाकुर छलफलमा सहभागी भएका थिए । प्रचण्ड उपस्थित नभएको खुमलटारनिकट स्रोतले जानकारी दियो । “प्रधानमन्त्री आफैं पार्टी अध्यक्ष पनि हो । सबै कुरा उहाँले गरिराख्नु भएकै छ । त्यही भएर प्रचण्ड नजानुभएको हो । खबर त आएको थियो,” खुमलटारनिकट स्रोत भन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सीईओमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको थियो । दुई अध्यक्षबीच वार्ता, संवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति नरोकेको भन्दै प्रचण्ड क्षुब्ध बनेका थिए । त्यही असन्तुष्टिका कारण प्रचण्ड मङ्गलबारको परामर्शमा सहभागी नभएको स्रोतको दाबी छ ।
मङ्गलबार साँझ दुई अध्इक्षसहित चारजना नेता वार्तामा बसेका थिए । त्यसदिनको बैठकमा भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओ बनाएको भन्दै प्रचण्ड र खनाल आक्रोशित बनेका थिए । प्रचण्ड र खनालले आपत्ति जनाइरहँदा ओलीले भट्ट योग्य र उपयुक्त पात्र भएको भन्दै बचाउ गरेको स्रोतको भनाइ छ ।